भावना पोख्न कलाको सहारा- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
भावना पोख्न कलाको सहारा
मंसिर २२, २०७६ सुशीला तामा‌ङ
काठमाडौँ — विश्व विज्ञानमा अल्बर्ट आइन्सटाइन, सर आयज्याक न्युटनजस्तै स्टेफन हकिङको पनि नाम उचो छ । उनी शारीरिक रूपमा अशक्त थिए । विद्यार्थी जीवनमा नै मोटर न्युरोन रोगले ग्रसित भएपछि उनको शरीर निष्क्रिय भएसँगै आवाजसमेत बन्द भएको थियो । पछि उपकरणकै सहायताले आफ्ना विचारहरू राख्दै उनले सापेक्षतासम्बन्धी सिद्धान्त र ब्ल्याक होलको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे ।
उनले ‘अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम’ जस्ता विज्ञानसम्बन्धी लेखिएका पुस्तकहरूमार्फत ब्रह्माण्ड विज्ञानको ज्ञानबारे खोज गरे । प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न र अगाडि बढ्न शरीरले रोक्न सक्दैन भन्ने कथनलाई उनी एक उदाहरणीय व्यक्तित्व हुन् ।
उनै खगोलविद् तथा भौतिक शास्त्रीका रूपमा विश्वमा चिनिएका हकिङलाई चित्रकार सुरक्षा वाग्लेले क्यानभासमा उतारेकी छन् । शारीरिक रूपमा उनका हात तथा खुट्टाका औंलाहरूमा केही समस्या छन् । हकिङको चित्रलाई ‘च्यालेन्जिङ लाइफ’ शीर्षक दिएर उनले आफ्नै जीवनका अनुभव र साहसलाई खोतल्ने प्रयास गरेको बताइन् । लहरा नै लहरा भएको रूखको माथितिर उनले हकिङलाई देखाइएकी छन् । ब्रह्माण्डकै पृष्ठभूमि झल्केको उनको चित्रमा हकिङ मुस्कुराइरहेका छन् । कसैको साथ र समर्थन भएमा मानिसले संसारमा नसक्ने केही छैन भनी दर्साउन लहरालाई प्रतीकात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेको उनले खुलाइन् ।
बिहीबारदेखि नक्सालस्थित नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जारी ‘सृजनशील पखेटाहरू’ शीर्षकमा ‘मनका सुन्दरता, सृजना सुन्दरता’ भावमा केन्द्रित हुँदै जारी चित्रकला प्रदर्शनीमा वाग्लेसहित १० जना शारीरिक रूपमा अशक्त चित्रकारहरूले आ–आफ्ना अभिव्यक्तिहरू चित्रबाटै पोखेका छन् । चित्रकारहरू लक्ष्मी दाहाल, रोशनकुमार श्रेष्ठ, राघव पोखरेलले शब्दमा केही व्यक्त गर्न सक्दैनन् र कसैको आवाजलाई सुन्न पनि दोभासेको सहायता लिनुपर्छ । तर प्रदर्शनीमा उनीहरूका चित्रले कतै धर्म, कतै समाज र कतै हाम्रै वरिपरि हराइरहेका प्रकृति, सम्पदाहरू बोलिरहेका छन् र उनै आवाजविहीनहरूको आवाज खोजिरहेका छन् । चित्रमा नै उनीहरूले आफूलाई शक्तिका रूपमा परिभाषित गरेका छन् ।
चित्रकार सञ्जय बान्तवाले यसपटक पनि घोडा सिरिजलाई निरन्तरता दिएका छन् । हृवीलचियरको सहायताले चलेको उनको झन्डै तीन दशकको कलायात्रामा आफूलाई घोडाकै रूपमा तुलना गर्छन् । शरीरले साथ नदिए पनि कलाकै माध्यममा उनी संसार घुमेको अनुभव गर्छन् । ‘म हिँड्न नसकेर के भो त, मेरो आत्मबल घोडाजस्तै दौडिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले मलाई यसकै प्रतिविम्ब उतार्न मन लाग्छ ।’ कला यात्राको संघर्षलाई उनी घोडाका आकृतिहरूमा नै बाँड्छन् । त्यस्तै चित्रकार दाहालले भारी बोकेर पहाडतिर उक्लिरहेको मानिसलाई चित्रको स्वरूपमा ढालेकी छन् । उनको यात्रालाई रंग र कुचीले प्रस्तुत गरेको छनक मिल्छ । अर्का चित्रकार श्रेष्ठले गौतम बुद्धलाई प्रस्तुत गरेका छन् । दोभासे रमा ढकालको सहायतामा उनी भन्दै थिए, ‘म जे देख्छु, जे भन्न मन लाग्छ चित्रमा नै व्यक्त गर्छु ।’ उनका अनुसार चित्र नै उनको साथी र प्रतिरूप हुन् । जसबाट उनले आफ्ना भावनाहरू सहजै पोख्न सक्छन् । उनीसँगै रहेका चित्रकार पोखरेलले भगवान् गणशेलाई सुन्दर बनाई चित्रमा ढालेका छन् । चित्र उनका लागि ‘म पनि सक्षम छु’ भन्ने आधार हो । दोभासे ढकालकै मद्दत लिँदै उनले यसैलाई सहयात्राका रूपमा निरन्तर अगाडि बढाउने बताए ।
हामी समावेशीको कुरा गर्दा कलामा पनि सबैलाई समान सहभागिता गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले प्रदर्शनी गरिएको चित्रकार बान्तवाले उल्लेख गरे । कुरा जति गरे पनि अपांगमैत्री वातावरण सबै ठाउँमा व्यावहारिक रूपमा लागू नभएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
प्रदर्शनीमा रमेश खनाल, मिथिलादेवी यादव, लालकाजी लामा, शशी शाह, उमेश श्रेष्ठलगायत ४० जना चित्रकारहरूको ६० भन्दा बढी चित्रहरू प्रदर्शित छन् । प्रदर्शनी यही बुधबारसम्म जारी रहनेछ ।
प्रकाशित : मंसिर २२, २०७६ ०९:०८
इराकमा रोकिएन प्रदर्शन
मंसिर २२, २०७६ (एजेन्सी)
बग्दाद — इराकमा रोजगारी र भ्रष्टाचार निवारणको माग गर्दै केही सातादेखि जारी प्रदर्शन थप चर्केको छ । राजधानी बग्दादमा भएको प्रदर्शनका क्रममा कम्तीमा १६ जना आन्दोलनकारीको ज्यान गएको छ ।
अधिकारीका अनुसार शुक्रबार साँझ अपरिचित केही बन्दुकधारीले प्रहार गरेको गोली लागी ४७ जना घाइते भएका छन् । सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार बग्दादको मध्यभागमा पर्ने अल खलानी स्क्वायरमा घटना भएको हो ।
‘हामीलाई प्राप्त पछिल्लो विवरणअनुसार घटनामा १६ प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ, भने ४७ घाइते छन्,’ एक सरकारी अधिकारीले भने । उनका अनुसार घाइतेको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । तीमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ । अधिकारीहरूले सुरुमा १० जनाको मृत्यु तथा ३५ घाइते भएको बताएका थिए । मृत्यु हुनेको संख्या अझ बढ्न सक्ने अनुमान छ । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार सुरक्षाकर्मीहरूले हस्तक्षेप नगर्दासम्म बन्दुकधारीले धेरै घरमा लगातार गोली हानेका थिए । सरकारको पुनर्संरचना, भ्रष्टाचारको अन्त्य, सार्वजनिक सेवामा सुधार, रोजगारी सृजनालगायतका माग राख्दै इराकमा गत अक्टोबर सुरुदेखि सरकार विरोध प्रदर्शन सुरु भएको हो । प्रदर्शनमा सहभागीमध्ये अधिकांश युवा तथा बेरोजगार रहेका बीबीसीले जनाएको छ ।
आन्दोलनकारीले ताहिर स्क्वायरलाई प्रदर्शनको मुख्य केन्द्र बनाएका छन् । आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएपछि यसअघि इराकी प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री अदेल अब्देल मेहदीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सिया समुदायका धर्मगुरु ग्रान्ड आयातोल्लाह अली सिस्तानीले दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री मेहदी राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन् ।
इराकमा भएका प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको एक सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारद्वारा गठित अनुसन्धान समितिका अनुसार अक्टोबर पहिलो साता भएका विरोध प्रदर्शनमा मात्रै १ सय ५० भन्दा बढीको ज्यान गएको थियो । समितिले दर्जनौं वरिष्ठ सुरक्षाकर्मीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने तथा घटनामा संलग्नलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने सिफारिस गरे पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
प्रकाशित : मंसिर २२, २०७६ ०९:०४
अबको २५ वर्षमा सिनेमा हल बाँकी रहने छैनन् : नसिरुद्दिन शाह
कोरोनालाई जितेर घर फर्किए अमिताभ बच्चन, अभिषेक अस्पतालमै
बबाल ! खतरा ! गर्छु भनेर संगीतमा आएको होइन : तृष्णा गुरुङ
घृणा गर्नेलाई अमिताभको जवाफ : तिमीहरुले तुफानको सामना गर्नुपर्नेछ
भदौदेखि फिल्म हल खोल्ने तयारी, सञ्‍चालक भन्छन्, 'कतिन्जेल यत्तिकै बस्ने ?'
चक्र बम भन्छन्- 'ओए काजल ! लकडाउनले कमाल गर्‍यो'